अपाङ्ग दलितलाई कुट्ने वडाध्यक्ष १३ हजार दिएर उम्किए ! | ebaglung.com
२०७४ श्रावण ६, शुक्रबार ०९:५२	Top News, थप समाचार 2281 पटक हेरिएको !
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७४ साउन ६ । गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठक बस्नु अघि नै एक जना अपाङ्ग दलितलाई कुटपिट गरेका गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाका एक जना वडाध्यक्ष १३ हजार ७ सय १० जरिवाना तिरेर उम्किएका छन् ।
त्यस विरुद्ध पिडितले ईलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रकोटमा उजुरी दिएका थिए । सो कार्यालयले हिजो दुवै पक्षलाई बोलाएर राखेको छलफलमा ठुलो समुहले दलित भएर दलितको ठाउँमा बस्नु प-यो , मुख सम्हाल्नु प¥यो भनेर हप्काएको र पिटाई खाने दलितले बढि बोलेको भन्दै माफी समेत मगाएको बुझिएको छ ।
छलफलमा सहभागी एक दलित अगुवाले भने –‘ घाईते बिक गाउँमा अरु संग पनि बढि बोल्ने गरेको आवाज लिएर धेरै जना ओईरिएका थिए , नव निर्वाचित वडाध्क्षको पार्टी विरुद्ध चुनावताका पनि नारावाजी गरेको भन्ने सुनियो , मुख सम्हाल्नु पर्ने दवाव पनि बढि आयो त्यसैले कुटपिट पछि उनि वुटवल सम्म जातेआते गरेको र उपचार खर्च जोडेर १३ हजार ७ सय १० पीडितलाई दिलाउने र एक महिना पछि थप उपचारको जिम्मा समेत वडाध्यक्ष पुनले लिनु पर्ने सहमति गरिएको हो, ठुलो समुहका सामु हाम्रो केहि लागेन । ’
यस सम्वन्धमा जिज्ञाषा राख्दा चन्द्रकोट ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक खुमबहादुर पुनले त्यस्तो सहमति भएको तर मिलापत्र अझै नभएको बताए । पीडित बिकले पनि अव बढि नबोल्ने , पीडक वडाध्यक्षले पनि अब उनलाई कुटपिट नगर्ने भन्दै दुवै पक्षले क्षमयाचन गरेको उनले बताए ।
त्यसो त सोही भेगको जयखानीमा एक दलित महिलालाई मजदुरी गर्नबाट समेत बञ्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ । स्थानिय एक मगर समुदायका व्यक्ति र ती दलित महिलालाई अनुचित सम्वन्ध राखेको भन्दै स्थानियले पक्राउ गरेका थिए । तर पछि ती पुरुषलाई भगाईयो । त्यस विरुद्ध पीडित दलित महिलाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएकी थिईन् । अदालतले उनिहरु विचको सम्वन्ध ठहर हुन नसकेको भन्दै फैसाला ग¥यो । अहिले ती दलित महिला अलपत्र पर्दै र गुहार पाईन भन्दै रुँदै हिडेकी छिन् ।
यसबाट विरक्त ति दलित महिला गत वर्षको तिहारमा सोरोठी समुहमा सहभागी हुन चाहिनन् । त्यस विरुद्ध स्थानियले उनलाई कसैको घरमा निमेक मजदुरी गर्न नदिने बन्देज लगाएको पीडित महिलाले बताईन् ।
उनि एकल दलित महिला संग वैवाहिक सम्वन्ध स्थापित गर्छु भन्दै वर्षऔं देखि यौन सम्वन्ध राख्दै आएका ती मगर समुदायका एकल पुरुष अहिले अर्कै स्थानमा बस्दै आएका छन तर फरार भनेर त्यहाँका हर्ताकर्ताहरुले अदालतमा बयान दिएको बताईएको छ ।
त्यसै क्षेत्र नम्वर १ मा गत वर्ष गैह्र दलित महिला संग प्रेम सम्वध राखेको भन्दै एक जना ८२ वर्षिय दलित बृद्धलाई वनवास पठाईएको थियो । पछि अधिकारकर्मीको पहलमा उनलाई गाउँ फर्काएर ‘एक हातमा लौरो साहरा , एक हातमा श्रीमति, ती ८२ वर्षिय बृद्धको विवाहमा सिडियो प्रमुख अथिती ’ बनाएर स–सम्मान घर भित्राईएको थियो ।
२०७५ कार्तिक ५, सोमबार १८:०८
छविलाल पाण्डे, बुर्तिवाङ २०७५ कात्तिक ५ । ढोरपाटनको आलुले बजार माग पुर्ति गरेसंगै पछिल्लो समयमा बुटवल क्षेत्रबाट आउने आलुको माग…